သောသီခို: ဒုတိယပင်လုံကိစ္စ သဘောကွဲလွဲမှု ရှိ
"အထူးသဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်မခံကြတာ များပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆိုရင်တော့ တကယ့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ့် အနေအထား မရှိဘူး။ မရှိတော့ တနည်းအားဖြင့် ပင်လုံသဘောတူညီချက်၊ ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ဒါတွေကို အခြေခံပြီးတော့ ဆွေးနွေးဖို့ လိုပါတယ်။”
If Ma Aung San Su Kyi can recall for Second Panglong agreement, I think we have to recall British to come back to Burma.
Ma Aung San Su Kyi is nothing now.
If she want to recall for her 1990 win election, it is better for her to call Japanese to come back to Burma as her father did.
As i understand it is Ma Aung San Su Kyi slight of hand with SPDC over Ethnics group.
It is not enough to cheat on Ethnics group.
They always thinking of cheating Ethnics group forever.
It is very sad poor Ethnics group in Burma.
I never heard about Ma Aung Sang Su Kyi talk about over 60 year war and SPDC while she hadachance to meet with UN.
I can see her face full of cheat, lie and steal.
ုံပြည်နယ်တွေ လူမျိုးနံမည်တွေပေးပြီးထားတာ တနည်းမကောင်းဘူးလို့ မြင်တယ်။လူမျိုးတွေဟာ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်ပိုင်လို့ မြင်ရမယ့် အစား ထိုထိုပြည်နယ်တွေကိုသာ မိမိပိုင်လို့ ထင်ကြတာများတယ်။ ပြည်ထောင်စုဆိုတာ နယ်မြေတွေစုထားတာမဟုက်ပဲ လူမျိုးတွေ၊ဓလေ့တွေ စုစည်းထားတဲ့ United သဘောကို ပို၍ Concept အရ ကြိုက်ပါကြောင်း။
ဗမာမဟုတ်တဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ ကို စိုးရိမ်ရတယ် လို့ အစချီပြီး ဆိုကတည်းကိုက လွဲကုန်ပြီ။ တရားမျှတတဲ့ မူနဲ့ ဟုတ်တာ လုပ်နေရင် ဘယ်တိုင်းရင်းသားအုပ်စုကမှ အားအားယားယားနေပြီး သေနတ်ကိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ် ၈၈ အရေးအခင်းမှလည်း ပေါ်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့ဖင် ဘယ်သူ့အီး လုပ်မနေကြပါနဲ့။
When did the words of UNION start in BURMA=MYANMAR ?